ICystoreira yi-algae ethinteke kakhulu ngokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Akuzona zonke izinhlobo zezilwane ezisengozini efanayo ekushintsheni kwesimo sezulu. Ngokuya nge-physiology, i-ecosystem lapho itholakala khona nesimo sezulu kungenzeka sithinteke noma cha. Kulokhu sizokhuluma ngakho iMediterranean Cystoseira, i-alga okungenzeka ukuthi iyinhlobo ethinteka kakhulu ngokwanda kwamazinga okushisa abangelwa ukuguquka kwesimo sezulu.
Ithinteka kanjani le-alga?
1 ICystoseira mediterranea
2 Imithelela eMedithera
3 Ukwehliswa kwezinga lokukhula
ICystoseira mediterranea iyinhlobo ye-algae ebalulekile etholakala olwandle. Ngokuya ngocwaningo lwamazwe omhlaba lapho abacwaningi abavela eMedithera Institute for Advanced Study, i-Imedea (UIB-CSIC) babambe iqhaza, le alga ingaba okuthinteke kakhulu ngokwanda kwamazinga okushisa kwamanzi okudalwe ukufudumala kwembulunga yonke.
Lapho amazinga okushisa enyuka ezilwandle nasolwandle, ukuxhumana phakathi kwezinhlobo kuyathinteka. Imvelo inebhalansi ehlala ngokushintshana kwezinto namandla phakathi kwezinhlobo eziphilayo ezikuyo imvelo. Kodwa-ke, lapho izimo zishintsha (njengoba kunjalo nokwanda kwamazinga okushisa), ukuxhumana phakathi kwezinhlobo zezilwane kungaguqula ukwakheka nokwakheka kweminye imvelo ebaluleke kakhulu.
Ucwaningo olwenziwe luthembeke impela maqondana nemibhede yotshani basolwandle bezinhlobo ezingenakubuyiselwa endaweni ezifana nePosidonia, okungenani maqondana nemiphumela yezilwane ezidla imifino.
Kodwa ubuye aveze ukuthi le-alga ingenye yezinhlobo ezizothinteka kakhulu. ULwandle iMedithera isivele ikhulisa ukushisa kwayo ngenxa yokushisa komhlaba. Imiphakathi eminingi ye-algae eMedithera isengozini yokuthinteka yizilwane ezidla imifino njenge-hedgehog, engaqhubeka nokunciphisa inani labo.
Umsebenzi owashicilelwa ephephabhukwini i- "Marine Pollution Bulletin" uhlaziye izici ezingaba nomthelela ekusebenzisaneni kwezitshalo nezitshalo, kuzanywa izinhlobo ezintathu zezitshalo zaseMedithera ezibaluleke kakhulu: izitshalo zePosidona oceanica neCymodocea nodosa kanye neCystoseira mediterranea alga , kanye nomthengi wayo ovamile, i-sea urchin, iParacentrotus lividus.
Imiphumela yalolu cwaningo ikhombisa ukuthi izilwane ezidla utshani zifaka ingcindezi enkulu kulezi zinhlobo ezimbili zezitshalo nokuthi abantu bazohlala befana nokushisa komhlaba. Kubonisa nokuthi zingancishiswa kusukela kushiwo izitshalo ziyakwazi ukukhiqiza izinto ezingaphezulu ezinobuthi noma ezingemnandi ezidliwayo ezidliwayo ezikhula emanzini afudumele.
Ukwehliswa kwezinga lokukhula
Kodwa-ke, lapho beqhubeka nokufunda ulwelwe, bayabona ukuthi amazinga okushisa aphezulu anciphisa izinga lokukhula, yize ukusetshenziswa kwabo yi-hedgehog kuhlala kuphakeme impela.
Ososayensi babheka isimo sikhathaza kakhulu ngoba njengamanje ukondla ngokweqile kwama-urchin sekuvele kunomthelela omkhulu emahlathini e-kelp, ukuze kuthi, uma kuthinteka amazinga okushisa aphezulu, kube khona "Izingwadule ezingaphansi kwamanzi", okungukuthi, indawo yamadwala ngaphandle kwe-algae.
Inani le-urchin likhula kakhulu futhi lithinta izindawo ezithile zasentshonalanga yeMedithera. Ama-Hedgehogs akhula ngenxa yokungabikho kwezidalwa zemvelo ezibangela ukudotshwa kwabantu ngokweqile.
Njengoba ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta yonke imvelo yonke, kufanele sikuqonde ukuthi ukuqina kokuxhumana kwalezi zinhlobo kuzoshintsha. Ukusebenzisana Zibalulekile ukuze imvelo ikhule kahle futhi ikakhulukazi ezindaweni ezinjengeMedithera, i-ecosystem evaliwe.
Umcwaningi we-CEAB-CSIC futhi oyinhloko yephrojekthi ye-RECCAM, uTeresa Alcoverro, uveze ukuthi, ngokocwaningo, "akuyona yonke imiphumela ezoba mibi" nezinhlobo ezinjengePosidonia, "yize ingavikelekile emiphumeleni eqondile yokushisa, yebo okungenani kubonakala sengathi bazokwazi ukumelana kahle nomthelela wezilwane ezidla imifino ”.
Ucwaningo luwumphumela wokubambisana phakathi kwabaphenyi abavela eCentre for Advanced Study of Blanes (CSIC), i-University of Barcelona, ​​i-Imedea, i-Oregon State University (i-USA), iDeakin University (Australia), i-Nature Conservation Foundation (India) neBangor University (Wales, UK) ngaphakathi kwephrojekthi ye-RECCAM.
Njengoba ukwazi ukubona, imvelo izwela kakhulu futhi ukuxhumana phakathi kwezinhlobo kuyadingeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » IMedithera iCystoreira yi-algae ethinteke kakhulu ngokuguquka kwesimo sezulu
UTito Erazo kusho
Lolu cwaningo lukubeka kucace bha, umgomo wokuthi sonke isidalwa esiphilayo noma esingaphili, esisemhlabeni, simiselwe ukwenza umsebenzi ohambisanayo noncikene ngendlela elinganiselayo, kepha okwamanje izenzo zomuntu zikuchithile ukusebenza ilinganisiwe, nemiphumela esibhekene nayo futhi ezoba yiyo iminyaka eminingi.
Phendula uTito Erazo
Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa ukudluliswa kwezifo